Lahjad Accelerator: Iswaafaji Iibka iyo Qalabka Suuqgeynta | Martech Zone
Sida laga soo xigtay Kooxda Aberdeen, shirkadaha ku fiicnaada kobcinta macdanta 'lead' waxay soo saaraan 50% iibsi dheeri ah oo diyaar u ah 33% qiime ka hooseeya. Iyada oo ay ku jirto istiraatiijiyad ahaan, sida ugu badan 50% ee guulahaaga cusub waxay ka imaan kartaa hogag waayeel ah, horumarsan. Kuwaasi waa tirooyin la yaab leh waxayna tilmaamayaan hal shay… Macluumaadka si fudud ugu diyaarso dhagaystayaashaada markay u baahdaan, adiguna waxaad si ballaaran u wanaajisay fursadahaaga inaad hoggaamiye ugu beddesho macmiil.
Lahjad Accelerator waa madal karti u leh iibinta si ay uga caawiso ururada iibka iyo ururada suuqgeynta inay maareeyaan, isku waafajiyaan iskuna dhafaan iibkooda iyo waxyaabaha suuqgeynta. Barxada waxay kuxirantahay CRM shirkad waxayna u ogolaaneysaa kooxdaada iibka inay la mid noqdaan rajada waxyaabaha ay u baahan yihiin, oo gaarsiiyaan oo cabbiraan saameynteeda
Faa'iidooyinka Accent Accelerator iyo astaamaha Iibka
Ka hel qalabka iyo ilaha ku saleysan xaaladda iibka qalab kasta.
Ka shaqee gudaha CRM-gaaga iyo habka iibinta ee u soo ifbaxaya ilaha sida loogu baahdo.
Isticmaal talooyinka tababarka, la-talinta khabiirka mawduuca, cilmi baarista ku habboon iyo qalabka si aad ugu xirmaan kooxaha wax iibsanaya.
Samee bandhigyo iyo dukumiintiyo qaas ah si aad u gudbiso fahamka una kala duwdo qiimahaaga.
Isku-dubarid howlaha kooxda iibka iyo la shaqeynta khubarada maaddada ku xeel dheer.
La wadaag qalabka iyo macluumaadka isla markaana raad raaca xiisaha kooxda ku saleysan jawaabaha habdhaqanka.
Faa'iidooyinka lahjadda 'Accent Accelerator' iyo sifooyinka Suuqgeynta
Maamul oo cusbooneysii ilaha iibka si hufan adoo adeegsanaya awoodaha maamulka.
Ku dhiirrigeli isticmaalka waxyaabaha ku jira ololeyaasha wacyi-gelinta iyo soo bandhigidda bogagga.
Abuur oo maamul liisaska khabiirrada iyo qaybaha tababarka ee ku xoojiya iibka aragti ku saleysan xaaladda.
Ka hel jawaab celin toos ah xubnaha kooxda iibka waxtarka nuxurka.
Abuur oo xakamee dukumiintiyada firfircoon ee laga beddeli karo iibka xaaladaha gaarka ah.
Ku hel aragti dhammaystiran oo ah waxyaabaha loo isticmaalo oo ugu caansan iibka.
Tags: dhawaaqa lahjadCRMmarketingwax suuq geyntaiibinta iyo suuqgeyntadukumiintiyada iibkaKordhinta Iibkaqalabka iibka
GoDaddy: Ka tagida boogaha gadaashiisa iyo dameerka dameerka